तीनजनाले चलाएको हल्ला सत्य बनेको कथा-CRI
हुँदैनभएको कुरालाई, अथवा गलत कुरालाई धेरै पटक प्रचार-प्रसार गरेपछि सर्वसाधारणले त्यसलाई सत्य कुराका रुपमा स्वीकार गर्नसक्छन्। चीनको सँस्कृतिमा “तीन जनाले चलाएको हल्ला सत्य बन्ने ” भन्ने कथामा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ।
इसा पूर्व पाँचौं शताव्दीमा धेरै साना मुलुकहरु थिए। ती मुलुकहरु बीच सीमा-क्षेत्रमा सधैं विवाद भै युद्ध नै हुनेगर्दथ्यो। यसैकारण इतिहासविदहरुले यस अवधिलाई “युद्धकाल ” भन्ने नाम दिएका हुन।
त्यस बेला दुइवटा मुलुक— वै मुलुक र चाउ मुलुकको सिमाना एक-अर्कासँग जोडिएको थियो। ती दुइवटा मुलुक बीच मैत्रिपूर्ण सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। त्यस सम्झौतालाई अरु प्रभावकारी बनाउनका लागि दुबै मुलुकले एक-अर्काका बन्धकहरुको आदान-प्रदान गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसैले वैका राजाले आफ्ना एकजना छोरालाई चाउ मुलुकको राजधानी हान तानमा पुठाउनुभएको थियो। आफ्ना छोराको सुरक्षाका लागि वैका राजाले एकजना मन्त्री फांग छौंलाई छोराका साथ पठाउने निर्णय गर्नुभयो।
श्री फांग छौं एकजना दक्ष मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सरकारमा उहाँको विरोध गर्ने केही पदाधिकारी थिए। आफू देश बाहिर गएपछि केही पदाधिकारीहरुले आफ्ना बारेमा राजासमक्ष केही नराम्रो कुरा गर्नसक्ने चिन्ता उहाँमा थियो। त्यसैले प्रस्थान गर्नुअघि उहाँले वैका राजालाई भन्नुभयो: एकजना मानिसले सडकमा एउटा बाघ आएको कुरा भन्यो भने तपाईं त्यस्तो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुन्न?
राजाले भन्नुभयोः म विश्वास गर्नसक्दिन। बाघ कसरी सडकमा आउनसक्छ?
श्री फांग छौंले फेरि सोध्नुभयोः दुइजना मानिसले सडकमा एउटा बाघ आएको कुरा भने भने तपाईं त्यस्तो कुराको विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुन्न?
वै राजाले जवाफ दिनुभयोः दुइजना मानिसले उक्त कुरा भनमा मैले केही हदसम्म विश्वास गर्नुपर्छ।
श्री फांग छौंले फेरि सोध्नुभयो, तीनजना मानिसले सडकमा एउटा बाघ आएको कुरा भनेमा तपाईं त्यस्तो कुराको विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुदैन?
वै राजाले जवाफ दिनुभयोः तीनजनाले उक्त कुरा भनेमा मैले अवश्य विश्वास गर्नुपर्छ।
वै राजाले यस्तो जवाफ दिनुभएपछि श्री फांग छौं झन् चिन्तित हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयोः तपाईं विचार गर्नुहोस्। बाघ सडकमा आइपुग्ने सम्भावना नै छैन। यो सबैलाई थाहा छ। तर तीनजना मानिसले उक्त कुरा भनेका कारण सडकमा बाघ आएको कुरामा विश्वास गरिएको छ। चाउ मुलुकको राजधानी हान तान र हाम्रो देशका राजधानी ता ल्यांग बीचको दूरी राजदरबार र सडक बीचको दूरीभन्दा धेरै बढी छ। म वै मुलुकबाट बाहिर गएपछि मेरा विरुद्ध बोल्ने मानिसहरुको संख्या तीनजनाभन्दा धेरै हुनसक्छ।
वै राजाले श्री फांग छौंको कुरा बल्ल बुझ्नुभयो। उहाँले श्री फांग छौंलाई भन्नुभयोः तपाईंको आशय मैले बुझें। निश्चिन्त भएर जानुहोस्।
श्री फांग छौं वै राजाका छोराका साथ हान तान पुग्नुभयो।
श्री फांग छौं वै मुलुकबाट गएपछि धेरै पदाधिकारीहरुले उहाँका विरुद्ध वै राजासँग कुरा गरे। शुरुमा वै राजाले श्री फांग छौं एकजना दक्ष एवम् देशभक्त मान्छे भएको ठहर लिएर उहाँहरुसँग बहस गर्नुभयो। दुर्भाग्यको कुरा के भने, श्री फांग छौंका राजनीतिक शत्रुहरुले धेरै पटक वै राजासमक्ष उक्त कुरा दोहर्‍याएपछि वै राजाले उहाँहरुको कुरामा विश्वास गर्नुभयो। श्री फांग छौं स्वदेश फर्केपछि वै राजाले श्री फांग छौंलाई आफूसँग भेट दिनुभएन।
यसबाट "तीनजनाले चलाएको हल्ला सत्य" भन्ने भनाइ प्रचलनमा आएको हो। यसबाट जनमतको शक्तिलाई ठूलो महत्व दिइएको कुरा पनि प्रष्ट भएको छ।